Ogaden News Agency (ONA) – Farqiga u dhexeeya Xabsiga Maekelawi ee Adisababa iyo Jeel Ogaden
Farqiga u dhexeeya Xabsiga Maekelawi ee Adisababa iyo Jeel Ogaden
Posted by ONA Admin	/ November 9, 2013
Xabsiga Jeel Ogaden wuxuu caan ka yahay Ogadenya Ogadenya, hasa ahaatee lagama yaqaano Itobiya Jeel Ogaden wuxuu yahay, meesha xabsiga Maekelwi aan laga aqoonin Ogadenya hasa ahaatee aad looga yaqaano loogana cabsado Itobiya. Waxaa kaloo iyadana jirta in jeelka Maekelawi ay haya’adaha caalamka wax badan ka qoreen (Warbixinta HRW), lana socodsiiyeen dunida waxa ka socda gudihiisa ilaa heer, meesha Jeel Ogaden sheekada naxdinta leh ee dadka ka soo baxa ay ka warinayaan oo qofka caadiga ay adagtahay inuu rumaysto waxaan ahayn aanay ka ogayn haya’adaha caalamiga ee u dooda xuquuqul insaanka ama xuquuqda xabsiyada.
Inta aynaan dulucda maqaalka gudagalin aynu yarehe ifino ujeedada ay labadaa xabsi u jiraan iyo caqliga ka dambeeya asaaskooda. Dhowr bilood oo kali ah ayuu ka dambeeyay Mingistu burburkii Somaliya. Sidaa daraadeed kooxda TPLF markay soo galayeen Adisababa wuxuu ahaa qorshaha loo dajiyay in aanay ka dhicin Itobiya wixii ka dhacay Somaliya oo aanu qarankaasi burburin. Si loo hirgaliyo qorshahaa waxaa la faray maleesiyadii Ihadig-ta inay suuqa ku toogtaan qofkay ka dareemaan madaxtaag ama lagu sheego xatooyo ama boob. Kumanaan qof oo shacab ah oon dambi weyn galin ayaa sidaa ku tagay oo u badnaa qawmiyadaha Amxaarada iyo Oromada, hadafka ugu weyn ee loo dilayna ay ahayd un in inta ka soo hadha labadaa qawmiyadood oo ah kuwa ugu badan Itobiya lagu cabsi galiyo. Sidii loo qorsheeyay ayay Ihadig-tii u fulisay. Boqolaal qof ayay toogteen, kumanaan kalena waxay dhigeen xabsiyada maxkamad la’aan, waxayna dhowr bilood gudahood ku xasilyeen dalkii. Hasa ahaatee laba arimood ayay keentay arintii loo fasaxay TPLF si looga baajiyo Itobiya burbur la mid ah midkii ku dhacay Somaliya. 1- TPLF oo fahamtay inay xabad ku xakamayn karto qawmiyadaha ka badan. 2- Shacabka oo aad u cabsaday islamarkaana u arkay in dawladaha waaweyn ee deeqda siiya Itobiya raali uga yihiin TPLF dhibaatada ay ku hayaan shacabka. Labadaa arimood oo is-biirsaday waxay ku dhiirigaliyeen xukuumadda Wayaanaha inay dad badan oo shacab ah ku laayaan waxay ugu yeedhaan xabsiyo hasa ahaatee noqday xeryo la mid ah kuwii Nazi-ga ee la odhan jiray Concentration Camps. Jeel Ogadena wuxuu ka mid yahay kuwaa, wuxuuse kaga duwan yahay dadka ugu xareysan Itobiya halkaa oo aanay dan ka lahayn iyo kuwa gacanta ku haya maxaabiista ee ugu laaya dadka shacabka ah si bahalnima ah oo ka baxsan dareenka aadminimo oo Cabdi iley uu shaqsiyan u maamulo iyo qaar uu isaga ku soo xushay siyaaba kala duwan.
Askarta gudaha jeelka ka shaqeeya waxaa ka reeban arima badan, ay ka mid tahay inuu naxariis yarna u muujiyo maxbuuska ama kula hadlo ereyo rajogalin kara, qaar badan oo ka mid ahaa ayaana dib xabsiga u galay ama meela kale loola kacay markii looga shakiyay danqasho. Loomana ogola inay dibadda saaxiibo ku yeeshaan, iska daa gudaha xabsigee, dhexdoodana waxaa ka jirta colaad iyo in is-jaajoosaan ama is-fashilaan. Taasoo jirta ayaan laga waayin qof Alle ka cabsiga ay marun ku soo duxdo oo ka sheekeeya jareemooyinka ka dhaca Jeel Ogaden ama qaar uu Ilaahay ka soo daayo oo ka sheekeeya dhibkii ka soo maray jeelka.
Waxaan idiin soo gudbin doonaa warbixino ay soo diyaariyeen dad gudaha jooga oo soo ururiyay xogta Jeelasha Ogadenya ku baahsan ee dadka lagu ciqaabo gaar ahaan JeelOgaden oon si gaar ah uga warbixin doono iyo warbixina kale oo arimahaa la xidhiidha. Ujeedada 1aad een u soo bandhigayno warbixinadaana waa in dadweynaha Somaliyeed ee Ogadenya lasocdaan dhibaatada ay dambiilayaasha maamulka Jigjiga loo wakiishay ku hayaan shacabka, anagoo soo qori doona warbixinada dambe magacyada gacan-ku-dhiiglayaasha dadka ku laaya Jeel Ogadeen. La socda.